Cali Maxamed Geedi oo Todobaadkaan ku dhawaaqaya xisbi mucaarad ah | Somsoon
Home WARAR Cali Maxamed Geedi oo Todobaadkaan ku dhawaaqaya xisbi mucaarad ah
Cali Maxamed Geedi oo Todobaadkaan ku dhawaaqaya xisbi mucaarad ah
Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Cali Maxamed Geedi oo hadal ka jeediyay munaasabad lagu qabta magaalada Muqdisho oo lagu soo dhaweynayey magacaabistii guddoomiye Cumar Filish, ayaa sheegay in dhawaan uu Muqdisho uga dhawaaqi doono xisbi mucaarad cusub, kaas oo sida uu sheegay uu isagu hoggaamin doono.
Waxaa uu sheegay in hada xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira ay sharci yihiin, isla markaana uu meel mariyay baarlamaanka dalka, madaxweynuhuna uu digreeto ku ansixiyay, isagoo sheegay in xisbigiisu uu noqon doono mid wax dhisa.
Sagaalka bishaan oo ku beegan maalinta Arbacada ee nasoo aadan ayuu sheegay Cali Maxamed Geedi in uu Muqdisho ugu dhawaaqi doono xisbigaas cusub oo mucaarad ku noqon doona dowladda sida uu hadalka u dhigay.
Siyaasiyiinta sida aadka ah ugu dhaw madaxda dowladda federaalka ayaa lagu tiriyaa Cali Maxamed Geeddi, waxaana jirtay in dhowr jeer uu warbaahinta kasoo muuqday isagoo difaacaya madaxda dowladda federaalka.
Article horeShirkadda Jubba Airways oo dacwad ka furtay dalka Kenya
Article socoda Duqa Muqdisho oo soo bandhigay qorshihiisa Caasimadda